Biniaadanka waxa oo uuga duwanyahay xayawaanka waxaa ka mid ah, ogaashaha in oo ilaaheey jiro. Ku dhawaad ​​100% Soomaalida waxee rumeesanyihiin in oo ilaaheey jiro, ayaga oo raacsan diinta Islaamka.
Maadaamuu Ilaahay nolosha ina siiyay waa inaan isaga keliya caabudno. Ilaahay binuʼaadanka wuxuu siiyay ikhtiyaar.
↑ Abuureheenna Jacaylka Badan Wuu Ina Daneeyaa
↑ Muxuu Ilaahay Dunida u Abuuray?
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Insaan&oldid=225691"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 4 Diseembar 2021, marka ee eheed 10:12.